The Irrawaddy's Blog: ဒီနေ့ထုတ် The Irrawaddy ဂျာနယ် အမှတ် ၂၂
ဒီနေ့ထုတ် The Irrawaddy ဂျာနယ် အမှတ် ၂၂
ဒီနေ့ထုတ် The Irrawaddy ဂျာနယ်မှာ ဒါတွေ ဖတ်ရပါမယ် ....
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ မြေကွက်နှင့် ကားပါမစ် NLD နှင့် SNLD လက်မခံ
ဘာသာကူးပြောင်း ဥပဒေကြမ်းတွင် လွပ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ကန့်သတ်ထားဟုဆို
ထိုင်းတွင် ကယ်တင်ရှင်ပုံစံ စစ်အာဏာသိမ်းမှု မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိုရိုက်ခတ်
လယ်/ဆည် ၀န်ကြီးဌာန၏ ဒေါ်လာ ၁၃၆ သန်း ချေးငွေ လွှတ်တော်က ရွှေ့ဆိုင်း
ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားတဲ့ ပဲခူးက တရားသူကြီးဇနီး ၂ နှစ်ကျော်အထိ ရဲတပ်ဖွဲ့ မဖမ်းနိုင်သေး
ထိုင်းငါးဖမ်းလှေကို စီးနင်းပြီး ရောင်းစားခံထားရတဲ့ မြန်မာတွေကို ကယ်တင်
သတင်း၊ဆောင်းပါး၊ အင်တာဗျူး၊ သုံးသပ်ချက်
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး စစ်တပ်နဲ့ အပေးအယူလုပ်ဖို့ လိုသလား
ယူနီဆက်ဖ် ရန်ကုန်ရုံး ငှားရမ်းခ သတင်း နောက်ကွယ်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကူးအပြောင်း အဆင်ပြေပါ့မလား
သင့်လျော်မည့် ဖက်ဒရယ် ပုံစံကို ရှာဖွေခြင်း
တည်ငြိမ်မှုပြန်ရဖို့ အလှမ်းဝေးဦးမယ့် ထိုင်း နိုင်ငံရေး
အင်အားကြီးလာတဲ့ တရုတ်က ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရေး အာမ မခံနိုင်
အပစ်ရပ်မူကြမ်း၌ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်း တပ်မတော် လက်ခံပြီ
ထိန်းသိမ်းရမယ့် ရှားပါးမျိုးစိတ်များနဲ့ မိန်းမလှကျွန်း
ကြိုးတိုက်ဋီကာ အပိုင်း ၆
ဘတ်ဂျက်နှင့် ပြည်သူ ဝေးမနေစေချင်
နော်ဝေ-မြန်မာ သံအမတ်ဟောင်းကို တယ်လီနော ဒုဥက္ကဋ္ဌခန့်
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွဲဆောင်ရေး လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယးကို မြန်မာပြိုင်နေရ
ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ရမယ် (ဒေါ်ခင်ဥမ္မာနဲ့အင်တာဗျူး)
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့် မြန်မာ့သနပ်ခါး
ပြောင်းလဲနေတာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အိမ်အေးကျော်
သန်လျင်မြို့က ပွင့် မြန်မာထမင်းဆိုင်
ပုခက်လွှဲသော လက်ပိုင်ရှင် ယာဉ်နောက်လိုက်များ
အပူအပင် မကင်းတဲ့ ကလေးဘ၀
၂၁ ရာစု မြန်မာမိခင်တယောက်၏ ရုပ်ပုံလွှာ
တောင်လေးလုံးမှာ သံမဏိကြယ်ပြာ လင်းထိန်တဲ့နေ့
ခေတ်ဆန်ရင်ဆန်၊ ခေတ်မလွန်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ အလှမယ် ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ စကားစမြည်
Posted in: မီဒီယာ , အညွှန်း , ထွေထွေရာရာ
Bino said... :
Johntin Aung shared Ko Hti's photo.
Nay Nay Win Maw likes this.
Bo Hnin ဘီနို
Bo Hnin ဘတ်ဂျက်နှင့် ပြည်သူ ဝေးမနေစေချင် ဆောင်းပါး သရုပ်ဖေါ်ကာတွန်း အပေါ် BINO’s comment.
ဒီနေ့ထွက်တဲ့ The Irrawaddy ဂျာနယ် ထဲက ဘက်နှင့် ပြည်သူ ဝေးမနေစေချင် ဆောင်းပါးရဲ့ သရုပ်ဖေါ်ပုံကို ဂျွန်တင်အောင် ရှယ်ယာလုပ်ထားတာပဲဗျ။
ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားတာက ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်ကုန်က အခွန်၊ သစ်တောထွက် ကရတဲ့ အခွန်၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များဆီက အခွန်၊ ပြည်သူတွေဆီက ရတဲ့ အခွန်၊ ပြည်ပက ချေးယူရငွေ စတဲ့ ရငွေတွေကို ဘယ်လိုခွဲဝေသုံးသလဲ။
ပညာရေး မှာ ၆% ခန့်။
ကျန်းမားရေးမှာ ၃% ကျော်။
ကာကွယ်ရေးမှာ ၁၂% ကျော်လို့ဆိုထားတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ဘဏ္ဍာနှစ်၂၀၁၄-၂၀၁၅ အတွက် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ဒေါ်လာ ၂.၃ ဘီလျံ တောင်းဆိုထားတယ် ဆိုတယ်။
ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် ချေးငွေက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စုစုပေါင်း အားလုံးအတွက် ၃.၅% သာရှိတဲ့အတွက် ဝန်ကြီးဌာန အချို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်မျှပင်မရှိလို့ဆိုထားတယ်။
ဘတ်ဂျက်မှာ ပိုငွေဆိုတာ မရှိပဲ လိုငွေချည်း ရှိတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်မှာ ကျပ်ဘီလီယံ ၇၂၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။
အဲဒီအကြောင်း သရုပ်ဖေါ်ထားတဲ့ ကာတွန်းပုံကတော့ ရှင်းပြစရာမလိုအောင် ပေါ်လွင်နေလို့ ပြောစရာမရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီကာတွန်းကို ငါက Technical Point of View ကနေကြည့်တယ်။
ဂျွန်တင်အောင် အပါအဝင် ရူပဗေဒ သင်ဘူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ။
အရည် တစ်ခုဟာ ပိုက်လိုင်းကျယ်ထဲ Free flow စီးဆင်းနေတယ်။
အဲဒီ အချိန်မှာ ပိုက်တစ်နေရာရာမှာ အပေါက်သေးသေးလေးပေါက်သွားရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ တမင်ဖေါက်ထားတဲ့ Drain Hole ဖြစ်ဖြစ် ရှိမယ်ဆိုရင် ပိုက်ထဲကရေက အပြင်ကို ပန်းမထွက်ပါဘူး။ သရုပ်ဖေါ်ပုံထဲမှာ ပါသလို တစက်ချင်းလဲ မကျပါဘူး။
အဲဒါနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှာ။ ဆိုလိုတာက အပြင်က လေကို အပေါက်သေးသေးလေးထဲကနေ ပိုက်ကြီးထဲ ဆွဲစုပ်သွားမှာ။ လက်နှင့်ထိရင် လက်ကို ဆွဲစုပ်သွားမှာ။ အဲဒီအချိန်မှာ အပေါက်သေးထဲကို ဝင်ဆန့်တဲ့ ပိုက်ငယ်တစ်ခုနှင့်ဆက်။ အစတစ်ဘက်ကို ရေစည်တစ်ခုထဲထည့်လိုက်ရင် ရေစည်ထဲက ရေတွေ အကုန်စုပ်ယူသွားမှာ။ Principle အရဆိုရင် Pressure နည်းသွားလို့ပါ။လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ပါ။ Valve ကို ပိတ်ထားမယ်၊ ဒါမှ မဟုတ်ပွင့်ရုံပဲ ဖွင့်ထားမယ် ဆိုရင်တော့ အပေါက်သေးသေးလေးထဲက အရည်တွေ ပန်းထွက်မှာပါ။ Valve အပြည့်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ အပြင်က ဟာတွေ ကို အဲဒီအပေါက်ကနေ စုပ်ယုနေမှာ။
Tanker သင်္ဘောမှာ Jet-A တင်တယ်။ ကုန်စတင် Commence Loading တာနှင့် Sample ယူမယ်၊ Manifold Valve ကို လိုသလောက်ပဲ ဖွင့် (ပိတ်လုနီးပါး) ရင် ပိုက်လိုင်းထဲက ဆီတွေ Drain hole ကနေ Sample bottle ထဲရောက်ပါတယ်။
ကုန်တင်လို့ OK တယ်။ လိုချင်တဲ့ tank ထဲလည်းရောက်ပြီ။ Jet-A ဖြစ်လို့ inhibitor တွက်ချက်ထည့်ရမယ်။ regulation အရ close loading ဖြစ်လို့ Cargo hatch အဖုံးကို ဖွင့်လို့ မရ။ တစ်ခါ Vapour lock (sounding pipe) ကထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း cargo tank ထဲမှာ ကြီးမားတဲ့ positive pressure ဖြစ်နေတယ်။ အန္တာရယ်များတယ်။
ဆိုတော့ pressure drop ဖြစ်တဲ့ principle ကိုသုံးမှာပေါ့။
1.P cargo tank ထဲ inhibitor ထည့်မယ်။ မလိုတဲ့ လိုင်းတွေ ပိတ်။ Minifold drain hole မှာ ဆက်ထားတဲ့ ပိုက် ကို inhibitor ထည့်ထားတဲ့ steel buck ထဲနှစ်လိုက်မယ်။ ခဏတာ အတောအတွင်း inhibitor အရည်ဟာ Drain pipe ကနေ Jet-A တွ အလျင်နှင့်စီးနေတဲ့ ပိုက်ကြီးထဲ ဝင်ရောက်ပြီး 1.P ထဲဝင်ရောက် ရောထွေးသွားမယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ steel buck ကို ဝါယာနှင့် earthing လုပ်ထားရမယ်။ Jet-A ဟာ static electricity cargo ဖြစ်နေလို့ပါ။
ကာတွန်း သရုပ်ဖေါ်ဆွဲတဲ့သူကို အကြံပေးပါရစေ။
တစ်စက်စက် ကျနေတဲ့ ပိုက်ြကီးရဲ့ အောက်ခြေကို ပိုက်ပိန်ပိန်သေးသေးလေး ဆက်လိုက်။
ဆင်းရဲသားပြည်သူရဲ့ ရေခွက် သ်ို့မဟုတ် ရေပုံးထဲ ကို ပိုက်ချလိုက်။ ဆင်းရဲသားရဲ့ ရေတွေ ကို ပိုက်ပိန်ပိန်သေးသေးလေး ထဲကနေ အရှိန်နှင့် ပြေးဆင်းနေတဲ့ ပိုက်ကြီးထဲပါသွားပြီး ဟ ထားတဲ့ အစိုးရပါးစပ်ထဲ ရောက်သွား။ မနိပ်ဘူးလား။